Imidlalo edumileyo eNgilane | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | ENgilani
Ngaba uyawenza umdlalo? Umsebenzi womzimba wezemidlalo uqhelekile kwihlabathi liphela, kodwa kukho imidlalo ethandwa kakhulu kunabanye, okanye imidlalo eqhutywa kuphela kwamanye amazwe kwaye ayingawo onke. Umzekelo, uyazi ukuba yintoni eyona midlalo idumileyo eNgilane?
Imidlalo ayingomdlalo, umdlalo ubeka ukhuphiswano, imigaqo, uqeqesho… kwaye inyani kukuba imidlalo emininzi iqhutywa eNgilane kwaye eminye awuyi kuyibona kwi-ESPN. Makhe sibone ukuba zintoni.
1 Imidlalo eNgilani
2 Imidlalo edumileyo eNgilane
6 Umdyarho wamahashe
Okokuqala, kufuneka kuthiwe i-United Kingdom inesiko elide kwezemidlalo kwaye Imidlalo eyaziwayo kakhulu yazalwa apha. Sithetha ngayo tennisukusuka iibhiliardsukusuka umdlalo wamanqindiukusuka ibholaukusuka yegalufa, i ihashe, i umbhoxo...
Iziqithi zincinci kwaye abantu abanasiphelo, akunjalo? Ukuba kuya kufuneka senze imbali encinci emva koko sinokubuyela kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe kunye neentshukumo zopolitiko ezazikho kwiziqithi ngelo xesha.
Ngokuqinisekileyo uvile malunga ezicocekileyoAbantu abangaqhelekanga, abangathandi iziyolo, ngokuchanekileyo. Ewe, iiPuritans zazinqabela izinto ezimbalwa, kubandakanya iithiyetha kunye nezinto ezithile zomzimba kunye neqela ezazinento yokwenza nongcakazo. Umzekelo, umdyarho wamahashe kunye nomdlalo wamanqindi. Ngokuwa kwePuritans le misebenzi yabuya ngamandla.
Ngenkulungwane ye-XNUMX iqakamba yayisele imiselwe kakuhle phakathi kwabakwinqanaba eliphezulu lesiNgesi nakwizikolo zikarhulumente ibhola. Ngokufudukela kwabantu ezidolophini ngenkulungwane ye-XNUMX, uninzi lwemidlalo yasemaphandleni yaqala ukufudukela esixekweni, ibambisene nabasebenzi, emva koko abakwinqanaba eliphakathi neliphezulu benza uhlengahlengiso. Amaziko kunye nobomi bawo obulawuliweyo benza okunye kwaye ke ezemidlalo esaziyo sonke ukuba zazilungiselelwe.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, ezemidlalo zibalulekile eNgilane kwaye ilizwe ngumnombo wezona zininzi zaziwa kwihlabathi liphela. Oko kwenza i-UK ihlale ingumdlali oyoyikwa kukhuphiswano lwamanye amazwe.
Umdla wezemidlalo uhambe kunye nabakholoniyali Ke namhlanje iikholoni zangaphambili ezinjengeOstreliya, iNew Zealand okanye iIndiya zikhuphisana nazo. Umzekelo, kwikhilikithi okanye kumbhoxo.
ENgilani kukho Umbutho weSizwe wombhoxo Kukwakho nayo Umanyano wombhoxo. Lo mdlalo yamkela imigaqo yayo ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX kwaye iya ithandwa kakhulu ezikolweni, ize ke ibe kwihlabathi liphela.
Umbhoxo apha ulungile kwaye uyonwabisa. Ewe kufuneka uyazi ukuba zahlukile Umbhoxo, Umbutho weRugby kunye neRugby League. Banemithetho eyahlukeneyo, inani labadlali, iindlela zokuqhubela phambili kwibhola.
Umbhoxo Ithandwa kakhulu eYorkshire, eMantla Ntshona eNgilane naseCumbria.. Eyona midlalo mikhulu ibanjelwe apha.
Lo mdlalo ithandwa ngakumbi kunetennis elizweni, kwaye kungenxa yokuba ifikeleleka ngakumbi, nokuba usaqala. Nangona sisiNgesi esihle, i-badminton wazalelwa eIndiya njengomahluko kumdlalo wesiNgesi wemveli odlalwa ngeerakethi
Kukho ke i Umbutho waseBadminton waseNgilani, owasekwa ngo-1893, elawula ezemidlalo esizweni kwaye ixhase enye Amazwe angama-41 apho lo mdlalo wenziwa khona.
Imvelaphi yalo mdlalo isaxoxwa kodwa ngaphandle kwamathandabuzo yazalelwa kwiziqithi zesiNgesi kwaye ukusukela ngoko yayiyinxalenye yesidima selizwe. Imbali isusela emva kwinkulungwane ye-XNUMX okanye ngaphambili kancinci, kuba igama lezemidlalo likhankanyiwe kumaxwebhu elo xesha. Ngokuqinisekileyo, inokudlalwa kwangoko kakhulu, njengohlobo lomdlalo wabantwana.
Hoy Kukho iiklabhu zeqakamba ezili-18 eNgilani kwaye nganye inamagama embali. Ihlobo ngalinye kwiklabhu nganye ithatha inxaxheba kwi-First Class Country Championship, itumente yeeligi ezimbini edlalwa ngaphezulu kweentsuku ezine.
Iqakamba ngumdlalo lowo sebenzisa ilulwane kunye nebhola, namaqela amabini ajongane ebaleni eliphakathi apho kukho isiduli esineentonga ekufuneka begqithise kuzo iibhola.
Nguye Okwesibini ezona zinto zibukelweyo e-UK kunye nokuma okude. Ivelisa imali eninzi kwaye iziganeko zayo ezibini eziphambili zezi Royal Ascot (apho ubukhosi buhamba neminqwazi emikhulu kwaye inqabile kakhulu), kunye Umnyhadala weCheltenham.
Ukhuphiswano lwamahashe lwenzeka kwiziqithi ukusukela kumaxesha eroman, uninzi lwemithetho yayo ivela apha. Inkqubo ye- Iklabhu yeJockey isukela ku-1750 kwaye yeyona Imisela yonke into kwezemidlalo.
Kukho zimbini iintlobo zeentlanga: umdyarho othe tyaba onemigama emide kwiitraki ezingaphazanyiswanga, kunye noMdyarho kaZwelonke wokuzingela omde kwaye apho ihashe kufuneka lixhume khona.
Kukho ngeenxa zonke 60 imidyarho Ilayisenisi e-UK, kunye nezinye ezimbini eMntla Ireland. Eyona indala yeyaseChester, ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX.
Intenetya inayo imvelaphi kwaye kubonakala ngathi babuyela emva kwinkulungwane yeshumi elinesibini kwi EFransi, apho ibhola yayidlala khona ngokuyibetha ngentende yesandla. Kubonakala ngathi uLouis X wayengathandi ukudlala ngaphandle kwaye ke wavula iinkundla zangaphakathi, isiko elalisasazeka kwizigodlo zasebukhosini zaseYurophu.
Iirackets zabonakala kwindawo yenkulungwane ye-XNUMX kwaye ke ngelo xesha umdlalo wawubizwa ngokuba yintenetya, igama elivela kwisiFrentshi, ithenez, bamba okanye uthathe, into eyayikhwazwa phakathi kwabachasi. Ke, yathandwa kakhulu eFrance naseNgilani. UHenry VIII wayengumntu othanda intenetya.
Imihla yentenetya yanamhlanje isusela kwiminyaka ye-30 yenkulungwane ye-XNUMX ukusukela ngoko baqala ukumisela imigaqo kunye neekhowudi zemidlalo. Namhlanje, ukhuphiswano IWimbledon Yeyona idume kakhulu eNgilane kwaye yenye ye-slam enkulu ye-ATP Tour. Idlalwe ukusukela ngo-1877.
Lo mdlalo wazalelwa eYiputa yamandulo nanamhlanje iyafana neeyunivesithi zesiNgesi kunye nezikolo. Ngapha koko, ezemidlalo njengoko sazi ukuba zazalwa ekuqaleni kwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe kwiRegattas ezazibanjelwe kuMlambo iThames, eLondon, apho imibutho eyahlukeneyo kunye neenkampani zazikhuphisana. Ngenkulungwane ye-XNUMX, "iiklabhu zamaphenyane" zazalwa kwizikolo zikarhulumente ezinje ngeKholeji yase-Eton okanye iSikolo saseDurham nakwiiyunivesithi ezaziwa ngcono njengeCambridge okanye iOxford.
La UManyano lwaMazwe ngaMazwe lokuHlamba yasekwa ngonyaka ka 1892 kwaye yile ulawula ezemidlalo eneneni, inamazwe angama-150 angamalungu. Ukukhwela ngumdlalo weOlimpiki kwaye ebekhona kwimidlalo ukusukela ngo-1896. Amadoda ebekhuphisana ukusukela oko, kodwa abasetyhini kuphela ukusukela ngo-1976.
Igalufa yaqanjwa eScotland kodwa ithandwa kakhulu eNgilani. Wazalelwa kunxweme olusempuma yeScotland, kufutshane ne-Edinburgh, emva koko abadlali baphosa amatye kwiindunduma zentlabathi. Abemi baseScotland babenomdla kakhulu kangangokuba bade bakutyeshela noqeqesho lwasemkhosini ngenkulungwane ye-XNUMX, ngenxa yoko uKing James I wagqiba kwelokuba ayeke.
Akukho mntu wayihoya kakhulu, kwaye igalufa emva koko yaba ngumdlalo oxhaswayo osisigqeba ngenkulungwane ye-XNUMX, phantsi kwemvume kaKing James IV. Ukusuka eScotland ukuya eNgilane naseNgilani ukuya kwihlabathi. Yaba ligosa eNgilane ngokusekwa kweGentlemen Golfers eLeith, iklabhu yokuqala yegalufa, ngo-1744. Ikhosi yokuqala yegalufa engama-18 yakhiwa eSt Andrews ngo-1764, ibeka umgangatho womdlalo.
Igalufa yasasazeka isuka kubukhosi baseBritane ngenkulungwane ye-XNUMX, ukuya eIndiya, eIreland, eOstreliya, eCanada, eUnited States naseHong Kong. I-Industrial Revolution yazisa utshintsho oluninzi kwaye uloliwe wenza iiklabhu zegalufa zashiya izixeko zisiya ezilalini, zifumana abalandeli kunye nabadlali. Ukuveliswa kweebhola kunye neeklabhu nako kutshintshile. IBritish Open yazalwa ngo-1860.
Ulawulo lwesiNgesi kwigalufa lwaphela xa wabonakala eUnited States, ngo-1894. Umbutho wakho iseke imigaqo yokugqibela yomdlalo kwaye kwasekwa iiklabhu ezininzi. Namhlanje, ngelixa iikhosi zegalufa eUnited States zintle kwaye zikhangeleka zenziwe kakuhle, ezo zaseNgilani zinzima kwaye azicocekanga.
Ngayiphi na imeko, ukuhlonipha indawo yayo yokuzalwa, ezinye zeeklasi zegalufa ezidumileyo kwihlabathi ziseScotland namhlanje: Gleneagles, Carnoustie, Saint Andrews, Royal Troon ...
Ibhola ekhatywayo inembali ende apha kwaye eneneni kukho amaxwebhu athetha ngebhola ekhatywayo kwi 1314. Kwakhona, ukhuphiswano lokuqala lwehlabathi lwenzeka apha kwaye iligi yokuqala yobungcali yasekwa apha ngokunjalo.
Zingaphezulu kwekhulu iiklabhu zebhola ekhatywayo neligi eyaziwa kakhulu yaziwa ngokuba Premier League. Le ligi inamaqela angama-20 e-UK kwaye phakathi kwezona zidumileyo yiArsenal, iLiverpool okanye iManchester United.
Ibhola lilawulwa apha nguMbutho weBhola ekhatywayo, enye yezona zinto zidala emhlabeni. Wazalelwa ukulawula iindidi ezahlukeneyo zebhola ekhatywayo ezazidlalwa ngelo xesha kwizikolo zikarhulumente zeli lizwe. Singatsho ukuba le mithetho ivela kwiMithetho yeCambridge, esekwe yile yunivesithi kwi1848.
Isandla neNgesi eyayihamba neenkampani kuyo yonke indawo umdlalo wehlabathi wawela imida. Namhlanje ngomnye wemidlalo edlalwa kakhulu kwihlabathi, zombini kunye nokuzonwabisa. INdebe yeHlabathi iququzelelwe yiFIFA ngokungathandabuzekiyo isihlwele-esikholisa kunye nemali eninzi.
Ukuza kuthi ga ngoku, eminye yemidlalo edumileyo eNgilane. Singongeza kuluhlu lwe ukuqubha, umkhondo kunye nebala, ibala kunye nehockey yeqhwa, kunye nevolleyball.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imidlalo edumileyo eNgilane